Muuse Biixi Muxuu ka yidhi Kulanka Dhex-maray Ibraahin-Dhaga-weyne? | Berberanews.com
Home WARARKA Muuse Biixi Muxuu ka yidhi Kulanka Dhex-maray Ibraahin-Dhaga-weyne?
Muuse Biixi Muxuu ka yidhi Kulanka Dhex-maray Ibraahin-Dhaga-weyne?
Hargeysa-(Berberanews)- Guddoomiyaha Xisbiga talada Somaliland haya ee KULMIYE Muuse Biixi Cabdi, ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey kulan ay wada yeesheen isaga iyo Guddoomiyaha Ururka UDHIS Ibraahin Cabdillaahi Xuseen (Dhaga-weyne), oo ka mid ah Hoggamiyeyaasha Ururrada siyaasadda ee Guddiga diiwaangelintu sheegtay inay ku hadheen wareeggii labaad ee kala reebista ururrada ee iyagu qaaddacay natiijada Guddiga.
“Horta erayga dhexdhexaadin waxa la dhexdhexaadiyaa laba dhinac oo is haya. Laba dhinac oo is-hayaa ma jiraan. Dhega-weyne waannu is aragnay horena waannu isu arki jirnay inaannu maalin wada qayilno iyo inaannu maalin wada qadayna-ba horeba waannu isu arki jirnay. Tan immika waxaannu isku aragnay Gurigiisa oo waxaannu nahay Rag saxiib ah oo meel walba isugu taga.” Sidaas ayuu yidhi Muuse Biixi Cabdi oo caawa u warramay Horn Cable TV.
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE mar uu ka hadlayey cabashada Ururrada hadhay ee qaaddacay natiijada Guddiga diiwaangelinta Ururrada iyo ansixinta Xisbiyada Somaliland soo saareen 20-kii bishii hore, waxa uu yidhi; “Waxaan u malaynayaa arrin immika cidi ergo u tagto oo dhexdhexaadin ka gashaa Ururrada iyo Xukuumadda inaanay jirin oo cid is haysaa immika ma jirto. metalan Ururrada hadhay maxay nagu leeyihiin? Waxay nagu leeyihiin waxay sheeganayaan in loo caddeeyo, taasi malaa waxay leedahay waddo ama Maxkamad ha noqoto ama Xukuumadda ha noqotee cidday ka cabanayaan inay Maxkamadda u gudbiyaan.” “Laakiin, eraygaas aad leedahay inaad dhexdhexaadiso, waa in la helaa cid ay Xukuumadda is-hayaan. Xukuumaddii cid ay is-hayaan ama Ururro immika ku soo taagani ma jiraan oo Xisbiga leh ha la I qanciyo waa in la qanciyaa. Qoladii Diiwaangelinta xaq bay u leeyihiin inay u shegaan sidii ay ku hadheen, waanay ka wadahadleen.” ayuu yidhi Guddoomiyaha KULMIYE Muuse Biixi.
Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wataa waxa uu intaa ku daray oo uu yidhi; “Dhega-weyne iyo aniga iyo Illaahay ayuun baa is ogaa, waana caadi in laba saxiib ahi ay is arkaan. Dhega-weyne iyo Ururkiisu wixii ay ka cabanayaan ee ay ku doodayaan ee Dastuuriya ee sharciya xaq bay u leeyihiin, Hay’adda ay ka cabanayaanna xaq bay u leedahay inay u caddayso waxay ka cabanayaan, waanay isla dhammaysanayaan oo waxba isla garan-waayi mayaan. Dhage-weyne iyo ciddiisa waa dad aan dalka looga baqayn oo xaq ku leh.”
Guddoomiyaha Xisbiga talada haya ee KULMIYE Muuse Biixi waxa uu ka hadlay Dastuurka qabyo qoraalka ah ee dalka Soomaaliya ee dooddiisu ay ka socoto magaalada Muqdisho, waxaanu yidhi; “Arrinta Xamar ka socota iyo Dastuurka Somaliland oo ah Dalkii la odhan jiray Biritish Somaliland ama maxniyadii Ingiriiska dalkii ka qaatay xorriyadda 26 Jun 1960-kii xuduudihii ay lahayd waa lama taabtaan oo Dastuurkaas Somaliland maaha mid quseeya.”
Previous article“Waxaa soo kordhay Xiisaha ay Itoobiya u qabto Isticmaalka Dekedda Berbera, waxaanannu ka wadahadalnay…”
Next article191 Qof oo Imtixaan u galay laba jago oo ka bannaan Wasaaradda Qorshaynta iyo baaxadda shaqo la’aanta Somaliland